Gudoomiyaha Deg Rako “madaxda beelaha is haya kama Adka Maleeshiyaadkooda” – SBC
Gudoomiyaha Deg Rako “madaxda beelaha is haya kama Adka Maleeshiyaadkooda”
iyadoo ay soconayaan Dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo Qilaafaad beeleed sababay dagaalo dhaliyay khasare oo ka jira qeybo ka mid ah gobolka Karkaar ayaa hadana waxaa bar bar soconaya weeraro ay dhinacyada ishayaa ay isku qaadayaan.
Ugu yaraan 2 qof ayaa ku geeriyootay 12-kalena waa ay ku dhaawacmeyn shaqaaqado markale ka dhacay Deegaano hoosyimaada Degmada Rako Raaxo ee gobolka Karkaar ka dib weeraro ay isku qaadeen maleeshiyaadka beelaha halkaasi isku haya.
Gudoomiyaha Degmada Rako Faarax Maxamuud Ibraahim oo la hadlayay SBC International ayaa sheegay in dagaaladaasi ay jiraan islamarkaana ay sameynayaan dad aan caqli laheyn isla markaana faraha ugu jiro hub.
Halka ay shaqaaqadani cusub ka dhacday ayaa waxaa lagu magacaabaa Labi waxaana ay degmada Rako u jirtaa 30 Km sida uu gudoomiyaha Degmadaasi u xaqiijiyay SBC International.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in kooxaha waxan sameynayaa ay yihiin kuwo aan laga adkeyn islamarkaana uu eedeyn dusha uga tuurayo Odayaashooda beelahaas, isagoona hoos ka xariiqay in lagu tacadiyayo odayaasha aysana aheyn mid ay xakameynkaraan dhacdooyinka dhacaya.
Ugu dambeyntii Gudoomiye Faarax MAxamuud Ibraahim ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo odayaasha beelahaasi in ay ka adkaadaan maleeshiyaadkooda, xalkuna uu intaasi ku jiro, isagoona ilaahey ka baryay in xal u keeno umadani.
Waxaad moodaa in gobolka karkaar,uu iminka la mid noqday,gobolada bari iyo mudug,waxaan shaki ku jirin,in
deegaanada puntland guud ahaan,ay iminka ka jirto,colaad u dhexaysa beelaha halkaasi wada degen,waxa faraha ka baxay,amnigii iyo maamul dowladeedkii,ay puntland ku taamaysay,tan iyo markii la unkay.waxaa jira arimo badan oo u sabab ah,dagaalada beelahamwaxa waayadan soo ifbaxay,nabadoono,aan ahayn kuwii rasmiga ahaa,oo iskood iso caleemasaaray,qayb wayna ku leh,hurinta dagaalada,qabaa’ilka,maamulka puntland,inkasta oo uu dadal badan,sameeyey waxa markasta xagal daacinaya,dad ka tirsan beelaha,oo dhiiga,umadda wax ku hela.wax ka qabasha la’aanta burcad badeeda argagixisada ah,taasi oo lacagaha faraha badan,oo ay helaan,ay kordhisay hubka sharcidarada ah,oo si dhibyar u soo gala puntland,tan ugo daran,waa sharcigii iyo cadaaladii,uu aan si fiican u shaqayn, shaki ku ma jiro,in haddii inta arimuho aysan farah ka bixi aan si dhab ah,uu muuqata,aan wax looga qaban,
waxa dhici guuldaro wayn,waa in shacbiga reer puntland iyo xukuumaduba ay,gacan bir ah ku qabtaan,wixii dhaawacaya amaanka iyo nabad kuwada noolaasha,dadka degen geyiga puntland.